Izindleko zamanani ukusetha iphrojekthi ephelele yezitshalo zerayisi
Mhlawumbe unombono wokuqala ibhizinisi lokugaya irayisi, kepha inkinga kuphela ukuthi kufanele ukhulise imali yokusetha iRice mill plant Setup. Njenganoma iyiphi iphrojekthi, izindleko zokumisa iphrojekthi yezitshalo zamalayisi zincike ezintweni ezahlukahlukene. Ngaphandle komthamo, izici ezahlukahlukene kufaka phakathi izinga lobuchwepheshe, okuzenzakalelayo / okungezenzakalelayo, impahla eluhlaza, abasebenzi abaqashiwe, ukupakisha, nabanye abaningi bathonya izindleko.
Lokhu kuyiqiniso impela ukuthi isabelomali kufanele sibe yinto esemqoka okufanele sikucabangele uma ufuna ukusetha iphrojekthi yesitshalo selayisi. Ngokuya kwisabelomali sakho kufanele uhlelele imisebenzi yakho yebhizinisi. Uma unesabelomali esilinganiselwe, kufanele uhlele ukuthenga imishini ngokufanele. Isabelomali sincike ezintweni eziningi ezifana,
Indawo lapho kufakwa khona isithombo selayisi
Ingqalasizinda yesimanje noma imishini
Ubungako bekhono lemihla ngemihla
Uma usuthathe isinqumo sebhajethi, kufanele useshe izindawo lapho ungathenga khona imishini yekhwalithi enhle kakhulu yebhizinisi lakho lokugaya irayisi. Ngoba ngaphandle kwemishini esebenza kahle yokugaya irayisi, ngeke ukwazi ukuxhasa ibhizinisi isikhathi eside. Kungakho kubalulekile ukuthi unakekele le ngxenye yebhizinisi lakho ekuqaleni. Ngemuva kokubheka wonke amaphuzu ashiwo, ungagcina usimisile isigayo selayisi endaweni oyithandayo.
I-VICTOR Rice MILL inikeza iphothifoliyo ebanzi yokusebenza kwenqubo eyenzelwe,umthamo ophakeme, isitshalo sokugaya irayisi esiphelele esisebenza ngamandla - kusuka ekudleni kwe-paddy kuya kwezinsizakalo ze-bagging kanye nezisiza emhlabeni wonke. Kubandakanya ukondliwa kwe-paddy, yokuhlanza paddy, paddy / irayisi kudlulisa, ukubekela phambili, ukuqunjelwa, ukuhlukaniswa kwe-paddy, mhlophe / polishing, uhla, polishing,ukuhlunga imibala, ukupakisha / ukuhluza njll.
I-turnkey ephelele ye-rice mill ye-VICTOR RICE MILL ingazuzisa abasebenzisi ngezindlela ezilandelayo:
1.Ukuncishiswa kwendle nokuphindaphindwa kwezinsizakusebenza ngale ndlela okonga imali.
2.Ukuqinisekisa ikhwalithi yephrojekthi,kufaka phakathi ikhwalithi yomshini ngamunye.
3.Ukuncishiswa kwezidingo zokulungisa,kungonga izindleko zomsebenzisi.
4.Ukusetshenziswa kwamandla okuncane nokukhiqiza okuningi
5.Kuhlanganiswe ukulawula okukhaliphile
6.Ukufakwa okusheshayo nokuqalisa, kunciphisa kakhulu isikhathi sokwakhiwa kweprojekthi yokugaya irayisi
Xhumana Nathi Ukusetha iphrojekthi ephelele yokutshala ilayisi